धेरै पढाइ कि सार्थक सिकाइ ?
पुस १, २०७१ | मुकुन्दराज शर्मा
हाम्रा शिक्षकहरू पनि सबै अयोग्य छैनन् । विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ताले कम पिरोलेको हो, पेसागत प्रतिबद्धता अलिकति नपुगेकै हो । बरु कम पढाऔँ तर सार्थक र दीगो ज्ञान हुने गरी पढाऔँ ।
डा. तुलसीप्रसाद थपलियाको लेख ‘हाम्रा निजी स्कूल र जीवन्त सिकाइ’ (शिक्षक मङ्सिर, २०७१) ले शुरू गरेको घोकाइ र सिकाइ सम्बन्धी बहस अगि बढाउन म आफ्ना केही विचार अगि सार्दै छु ।
गएको वर्षायाममा बेलायतमा बसोबास भएका मेरो नजिकको एक परिवारका सबै सदस्य नेपाल आएका थिए । परिवारमा उहीँको स्कूलमा कक्षा दुईमा पढ्ने करीब सात वर्षकी बालिका जोसिका बेलबासे पनि थिइन् । मैले जोसिकालाई ससाना प्रश्नहरू सोधेर उनको ज्ञान जाँच्न थालेँ । उनी जानेका कुरा निकै आत्मविश्वासका साथ बताउँथिन्, नजानेका कुरामा ‘सरी’ भन्थिन् । एक दिन कुरैकुरामा उनले मलाई भनिन्— “ठूलो ड्याडी, You know Switzerland isalandlocked country. मैले सोधेँ, Landlocked country भनेको के हो ?” उनले मैले जत्तिकै राम्रो परिभाषा दिँदै भनिन्, “like Nepal”. मलाई स्विट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित मुलुकु भनेको सही हो÷होइनभन्दा पनि landlocked country को उदाहरणसहित दिइएको परिभाषाले अवाक् बनायो । खाना खाने बेलामा सागसब्जीका फाइदा, तिनमा पाइने तŒवका बारेमा कुरा गर्थिन् । एक दिन उनले आफ्नो विद्यालयको वेबसाइट खोलेर ‘किचन गार्डन’ को फोटो देखाइन् । त्यो देखाएर उनले मलाई ‘सिड’ कसरी ‘जर्मिनेट’ हुन्छ भन्दै पढाइन् ।
हामी नेपालमा बढी मात्रामा विषयवस्तु पढाउन रुचाउँछौँ, गुणात्मक सिकाइमा ध्यान दिँदैनौँ । दुई कक्षाको विद्यार्थीलाई १७–१८ का गुणन कण्ठस्थ गराउँछौँ तर गुणनको अर्थ स्पष्ट पार्न सक्तैनौँ । पाहुनाका सामु बच्चाले १७ को पहाडा खरर भनेर सुनायो भने मक्ख पर्छौं तर १७ लाई चारपल्ट जोड्यो भने कति हुन्छ ? भनेर सोध्दा उत्तर आउँदैन । बोटबिरुवालाई पानी किन चाहिन्छ ? भनेर सोधे विद्यार्थीले परीक्षामा उत्तर लेख्छन् तर आफ्नै आँगनको गमलामा पानी नपाएर सुकेको पूmलप्रति उसको ध्यान जाँदैन । हामीले उसलाई डो¥याएर त्यहाँसम्म पु¥याउन सकेनौँ । एउटा सानो बालकले टुक्रा पारिएको रोटीमध्ये ठूलो टुक्रा र सानो टुक्राको पहिचान गर्न सक्छ र ठूलो टुक्रा आपूmले नपाए झ्गडा गर्छ । तर हामी आधा र एक चौथाइमध्ये कुन भिन्न ठूलो हुन्छ भनेर सिकाउन सङ्घर्षरत छौँ । हामीले धेरै पढाए राम्रो हुन्छ भन्ने बुझयौँ तर सार्थक सिकाइ भरपर्दो हुन्छ भन्ने बिर्सियौँ । त्रुटि समग्रमा यहीँनेर छ ।
पाँच कक्षाका विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुरा तीन वा चार कक्षाको उमेर समूहका केटाकेटीलाई बलपूर्वक पढाउँदैमा ठूलो भइँदैन, त्यस्तो शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको दर्जामा पनि पर्दैन । हामी सिकाइ उपलब्धिको सही मापन नै गर्दैनौँ । प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई शिक्षकले पुनर्संरचना गरेर आफ्नै पाठ्यक्रम, पाठयोजना, शिक्षण क्रियाकलापहरू तयार गर्नुपर्छ । ती योजना र क्रियाकलापहरू कक्षामा लगी प्रयोग गरेर जाँच्नुपर्छ । विद्यार्थीको तह र सिक्ने क्षमताको पहिचान गरेर मात्रै शिक्षण अगाडि बढ्नुपर्छ । सिद्धान्ततः हामी सबै यो कुरा जान्दछौँ तर गर्दैनौँ । शिक्षकले चाहे जे पनि सम्भव छ, अपवादलाई छोडेर ।
बेलायतका चौबिस हजारभन्दा बढी विद्यालयमध्ये करिब ९३ प्रतिशत सरकारी विद्यालय छन्, जसमा शुल्क तिर्नु पर्दैन र ती अब्बल पनि छन् । त्यहाँ कार्यरत सबै शिक्षक शिक्षणमा निपुण हुन्छन्, विद्यार्थीको सीप र रुचिको पहिचान गर्न सिपालु हुन्छन् ।
विद्यार्थीको भविष्यप्रति इमानदार, पेसाप्रति निष्ठावान् एवम् प्रतिबद्ध र परिश्रमी हुन्छन् । हाम्रा शिक्षकहरू पनि सबै अयोग्य छैनन् । विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ताले कम पिरोलेको हो, पेसागत प्रतिबद्धता अलिकति नपुगेकै हो । त्यस्तै विद्यालयमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको कमी र उचित शैक्षिक वातावरणको अभावले पनि उनीहरूको इच्छाशक्ति खुम्च्याइदिएको हो ।
सकिन्छ भने प्रशस्त पढाऔँ, सकिन्न भने बरु कम पढाऔँ तर सार्थक र दिगो ज्ञान हुने गरी पढाऔँ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको सही मापन बेगर स्तरोन्नति गर्न हामी बढी उदार भएका छौँ । जानोस् कि नजानोस्, कक्षोन्नति भएकै छ । अनि माथि पुगेर समस्यै समस्या । प्राथमिक शिक्षा नै जग हो, हामी जगमै खलबलिएका छौँ । अपाच्य हुने गरी धेरै कोच्याउनुभन्दा स्वस्थकर शिक्षा र सार्थक सिकाइ नै उपलब्धिमूलक होला ।
(लेखक ललितपुरस्थित लिटिल एन्जल्स स्कूलका प्रिन्सिपल हुन् ।)